चाकडीमा भुल्ने दिल निसानी : स्वतन्त्र पत्रकारिता कहिले गर्ने ? - Ujyaalo TImes - Same Vision, Different Angles
चाकडीमा भुल्ने दिल निसानी : स्वतन्त्र पत्रकारिता कहिले गर्ने ?
दुर्लभ बाघ हुन् प्रचण्ड, माछा जस्तो बल्छीमा पर्दैनन् ! यो विचार दिल निसानी मगरले कुनै अनलाईनमा लेखेका छन् । उनले प्रचण्डलाई बाघ देख्छन् । कुनैपनि मानिसले, मानिसलाई मानिस देख्दैन भने, त्यो सबै भन्दा ठुलो भरमा भएको भन्ने बुझिन्छ । आजकाल नेताहरुको आलोचना गर्दा सबैलाई राम्रो लाग्छ । दिल निसानी यस्ता पात्र हुन् ः जसको कुनै नैतिकता देखिदैन । यो पढ्दै गर्दा तपाईलाई पुर्बग्राही लागे जस्तो लाग्दा तरपनि यर्थाथ यहि नै हो ।
१० बर्षे सिंहात्मक युद्धको नुनले अरब पु¥याएपछि, उतैबाट कुनै समयमा बिप्लबको बुई चढेर प्रचण्डलाई शब्द प्रहार गरेकै लारण, उल्लु लेख्दा बिक्ने भउका हुन् । पछिल्लो समय उनी प्रचण्डलाई बाघ देख्ने पनि भैसके । यो भन्दा ठुलो लाज पत्रकारिता जगतमा छैन पनि होला । एउटा प्रश्न कुनै नेताको गुलाम गर्ने र बाघ देख्ने मनुष्यले मिडियाको डेस्कमा बसेर स्वतन्त्र पत्रिकारिता कसरी गर्न सक्छ ? चाकडीमा भुल्ने दिल निसानी : स्वतन्त्र पत्रकारिता कहिले गर्ने ?
मगरले अर्को बिचार लेखेपछि यो टिप्पनी उब्जीएको हो । आफुले आफु नचिन्ने अर्काको आलोचना गर्ने : चाकडीमा व्यस्त हाम्रा युवा नेताहरू कन्हैया कुमार जस्तो कहिले बन्ने ? उनले लेखेको बिचारले, उनी आफैलाई प्रश्न गरेको छ । अरुको आलोचना गर्न जति हुन्छ । तर आफ्नो पृष्ठभुमी र दैनिकी मगरले कहिलै देखदैन् ।
पत्रकारिता गर्ने मानिसका केहि तस्बिर देख्दा पनि हेर्नेलाई लाज लाग्ने प्रकारका छन् ।